सभापतिमा म जितेमा कांग्रेसलाई पुरानै अवस्थामा ल्याउँछु : देउवा- समाचार - कान्तिपुर समाचार
सभापतिमा म जितेमा कांग्रेसलाई पुरानै अवस्थामा ल्याउँछु : देउवा
मंसिर २६, २०७८ कान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौँ — प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापतिका उम्मेदवार शेरबहादुर देउवाले आफू जितेमा पार्टीलाई पुरानै अवस्था फर्काउने बताएका छन् ।
काठमाडौंमा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा देउवाले आफू सभापतिमा निर्वाचित भएमा आगामी निर्वाचनमा केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाउने दाबी गरे ।
'मुलुकलाई कस्युनिस्ट शासनबाट मुक्त गर्नुपर्नेछ । खासगरी ओलीमुक्त बनाउनु छ,' उनले भने, 'अहिले केन्द्रदेखि स्थानीय तहमा कांग्रेस सरकार बन्दै गएको छ । अब निर्वाचनपछि फेरि केन्द्र, प्रदेश, स्थानीय तहमा सरकार बनाएर कांग्रेसलाई पुरानै अवस्थामा ल्याउन सफल हुनेछ, त्यसैले सभापतिमा मलाई र मेरो टिमलाई जिताउनुस् ।'
यस्तै नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले शेरबहादुर देउवा र उनको टिमलाई जिताएर कांग्रेस आगामी निर्वाचनमा उच्च मनोबलका साथ जानुपर्ने बताए ।
सिटौलाले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार निर्वाचनसम्म रहने भन्दै उनको सभापतिमा जितेका प्रधानमन्त्रीसहित कांग्रेस निर्वाचनमा जानुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
'हामीसँग हारका अनुभव धेरै छन् । एमाले र माओवादी एक भएर बनेको बाम गठबन्धनका कारण हामीले हार ब्यहोर्‍यौं । यो सरकार निर्वाचनसम्म रहन्छ । निर्वाचन स्वच्छ, निप्ष्प र त्रासरहित वातावरणमा हुन्छ । निर्वाचन आउन लागेको बेला हामी महाधिवेशनमा छौं । सभापति पदमा हारेको प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सरकारमा जाने होइन, सभापति जितेका प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा उच्च मनोबलका साथ निर्वाचनमा जानुपर्छ,' उनले भने, 'सभापति दुई कार्यकालको व्यवस्था हामीले विधानमा गरेका छौं । यो टिम जित्दा परिपक्का नेता पनि छन् । युवा नेता पनि छन् । यसलाई विश्वासको मत जिताएर जानुपर्छ ।'
प्रकाशित : मंसिर २६, २०७८ १७:०६
देउवाजीले मेरो घरमा गुप्तचर पठाउनुभयो : शेखर कोइराला
मंसिर २६, २०७८ कुलचन्द्र न्यौपाने, ऋषिराम पौड्याल
काठमाडौँ — कांग्रेस सभापतिका प्रत्याशी शेखर कोइरालाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नोबारेमा बुझ्न घरमै इन्टलिजेन्स (गुप्तचर)का मान्छे पठाएको दाबी गरेका छन् । महाधिवेशनमा देउवासँग प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका कोइरालाले आइतबार कान्तिपुरसँगको अन्तर्वार्तामा देउवाका गतिविधिमाथि आपत्ति जनाएका हुन् ।
‘दुई/चार दिन अघिको कुरा हो, उहाँ(देउवा)ले इन्टलिजेन्टका मान्छे मेरै घरमा पठाउनु भयो । शेखर कोइरालाको घरमा इन्टलिजेन्सका व्यक्ति किन पठाउनुपर्‍यो ? यो ‘सिरियस’ छ । मेरो घरमा आएका इन्टलिजेन्सका व्यक्तिलाई मैले सोधे । त्यसपछि प्रहरी आइजीलाई फोन गरे । यो अवस्थाले के देखाउँछ ?’ उनले भने ।
देउवाले शेखर कोइरालाको ‘मोमेन्ट’ कहाँ छ भनेर पत्ता लगाउन खोजेको उल्लेख गरे गरे । ‘प्रहरीसँग कांग्रेसको प्रतिनिधि को–को जितेको छ भन्ने लिष्ट माग्नुहुन्छ । कांग्रेस भित्रको कुरा किन प्रहरीसँग माग्नुपर्‍यो ? त्यसले पार्टी कता जाँदै छ भन्ने देखाउँछ । यो अत्यन्तै गम्भीर कुरा हो । अति भइसकेपछि मैले यो कुरा आज खोल्नुपर्‍यो’ उनले भने ।
कोइरालाले निर्वाचन समितिबाट पनि गलत निर्णय भइरहेको दाबी गरे । निर्वाचन समितिका मान्छेहरू हाम्रा न्यायाधीश हुन् । उहाँहरूले सबै निर्णय सभापतिको पक्षमा गर्दै हुनुहुन्छ । तर पनि हामी प्रतिस्पर्धा गर्दैछौं, त्यो सबैभन्दा ठूलो कुरा हो’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्री देउवाले आइतबार बिहान ‘मैले जित्न सकिन भने गठबन्धनको सरकार जान्छ’ भनेर बोलेको विषयमा पनि कोइरालाले टिप्पणी गरेका छन् ।
‘देशको प्रधानमन्त्री र पार्टीका सभापति यति निरिह हुनुहुन्छ भन्ने मैले कल्पना नै गरेको थिइनँ । उहाँले हावादारी र गलत कुरा भनिरहनु भएको छ । झुटको खेती गर्दै हुनुहुन्छ । उहाँको नेतृत्व जाँदै छ । हाम्रो टिमले जितेपछि यो सरकार, यो गठबन्धन अझै सुदृढ हुन्छ । गठबन्धनलाई हामी आगामी चुनावसम्मै लैजान्छौं’ कोइरालाले भने,‘पहिला त यहाँ गठबन्धन रहने नरहने कुरा शेरबहादुरजीले किन गर्नुभएको हो ? कांग्रेसको महाधिवेशनमा प्रचण्ड र माधव नेपालले भोट दिने हो र ? नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरुले भोट दिने हो । उहाँ कति कमजोर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा यसले प्रस्ट हुन्छ ।’
कोइरालासँगको विस्तृत अन्तर्वार्ता सोमबार कान्तिपुर दैनिक र इकान्तिपुरमा प्रकाशित हुनेछ ।
प्रकाशित : मंसिर २६, २०७८ १७:०४